4 Cách Nấu Bò Kho Chay Ăn Bánh Mì Thơm Ngon Hấp Dẫn | Grado.vn - Grado.vn
Đang Đọc:4Cách Nấu Bò Kho Chay Ăn Bánh Mì Thơm Ngon Hấp Dẫn | Grado.vn in grado.vn
8 महिना पहिले –
गाईको मासु ब्रेज्ड शाकाहारी कसरी पकाउने धेरै सामाग्रीहरू वा जान्ने तरिकाहरू तयार नगरी धेरै सरल, छिटो। अब Nguyen किम संग अन्वेषण गरौं गाईको मासु ब्रेज्ड शाकाहारी कसरी पकाउने निम्न लेखमा घरमा स्वादिष्ट, मितव्ययी!
1 शाकाहारी ब्रेज्ड बीफ कसरी शाकाहारी टुक्रा गाईको मासुसँग पकाउने
1.1 तयारी सामग्री
1.2 शाकाहारी बीफ ब्रोथ पकाउने चरणहरू
2 काई टोफु र सेतो टोफुको साथ शाकाहारी ब्रेज्ड बीफ कसरी पकाउने
2.1 तयारी सामग्री
3 शाकाहारी रिब्सको साथ शाकाहारी ब्रेज्ड बीफ कसरी पकाउने
3.1 तयारी सामग्री
4 स्वादिष्ट शाकाहारी ब्रेज्ड बीफ नूडल सूप कसरी पकाउने
4.1 तयारी सामग्री
5 स्वादिष्ट शाकाहारी ब्रेज्ड बीफ कसरी पकाउने बारे टिप्पणीहरू
6 घरमा शाकाहारी ब्रेज्ड बीफ पकाउँदा प्रायः सोधिने प्रश्नहरू
6.1 शाकाहारी बीफ ब्रोथ पकाउन के सामग्री चाहिन्छ?
6.2 शाकाहारी ब्रेज्ड बीफको साथ के स्वादिष्ट छ?
शाकाहारी ब्रेज्ड बीफ कसरी शाकाहारी टुक्रा गाईको मासुसँग पकाउने
मासुको शाकाहारी स्लाइसहरू स्वादिष्ट शाकाहारी व्यंजनहरू बनाउन परिचित सामग्री हुन्। तपाईंले तिनीहरूलाई सजिलै पसलहरूमा फेला पार्न र लागू गर्न सक्नुहुन्छ गाईको मासु ब्रेज्ड शाकाहारी कसरी पकाउने विशेष शाकाहारी कटा गाईको मासु बाट।
– 100 ग्राम शाकाहारी गाईको मासुको टुक्रा
– ब्रेज्ड बीफ मसालाको 1 प्याक
– ब्रेज्ड बीफ स्वादयुक्त सोया ससको 1 जार
– 100 ग्राम सेतो टोफु, 100 ग्राम काई टोफु
– 100 ग्राम चिकन जांघ च्याउ, 100 ग्राम शिताके च्याउ
– गाजर 200 ग्राम
– 50 ग्राम मटर
– 1 लिटर ताजा नरिवल पानी
– 20 ग्राम धनिया, 20 ग्राम लेमनग्रास,3ग्राम ताजा खुर्सानी
उपकरण: भाँडो, नन-स्टिक प्यान, चक्कु,…
शाकाहारी बीफ ब्रोथ पकाउने चरणहरू
चरण 1: शाकाहारी स्लाइस गरिएको गाईको मासुलाई १५ मिनेट भिजाएर बाहिर निकालेर त्यसमा आधा प्याकेट ब्रेस्ड बीफ सिजनिङ पाउडर हाल्नुहोस्। एकै समयमा, तपाईंले shiitake च्याउ एक कटोरामा राख्नुहुन्छ,2ग्राम नुन थप्नुहोस् र फिल्टर गरिएको पानीमा 15 मिनेटको लागि च्याउ भिजाउनुहोस्।
चरण २: तपाईंले ky tofu, सेतो टोफुलाई टुक्रामा काट्नुहोस् र shiitake च्याउको शीर्षमा छाप बनाउन चक्कु प्रयोग गर्नुहोस्। कुखुराको जांघको लागि, तपाईंले च्याउको शीर्षमा गुणन चिन्ह पनि काट्नुहोस् र च्याउको शरीर काट्नुहोस्। थप रूपमा, तपाइँ काटिएको गाजर, फूलहरू काट्नुहोस् (यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने)।
चरण ३: तपाईं भाँडोमा 1 चम्चा खाना पकाउने तेल थपेर ब्रोथ तयार गर्न अगाडि बढ्नुहुन्छ, सुगन्धित नभएसम्म प्याजलाई लेमनग्रास र खुर्सानीले भुन्नुहोस्। त्यसपछि, तपाईले शाकाहारी टुक्रा गाईको मासुलाई2मिनेटको लागि हाल्नुहोस् र त्यसपछि भाँडोमा 1 लिटर नरिवलको पानी + 1 लिटर फिल्टर गरिएको पानी हाल्नुहोस्।
चरण ४: तपाईंले गाजर र बाँकी ½ प्याकेट ब्रेस्ड बीफ मसला पाउडर थप्नुहोस्। त्यसपछि, आधा चम्चा नुन,3चम्चा चिनी, र2चम्मच शाकाहारी मसलासँग सिजन गर्नुहोस्। यदि तपाईंलाई स्वाद पर्याप्त छैन भने, केवल आफ्नो स्वाद अनुरूप स्वाद गर्नुहोस्।
चरण ५: शिटाके च्याउ, कुखुराको तिघ्रा, के टोफु, मटर (उमालेको), सेतो टोफु र कोलिन्ट्रोलाई भाँडोमा राख्नुहोस्। यसलाई उमाल्दासम्म पकाउन जारी राख्नुहोस्, त्यसपछि ब्रेज्ड बीफ तेलको2चम्मच थप्नुहोस्।
चरण 6: अर्को5मिनेटको लागि पकाउनुहोस्, त्यसपछि 20 ग्राम ट्यापियोका स्टार्च र 30 एमएल पानी थप्नुहोस् शाकाहारी बीफ स्टकको भाँडोको लागि स्थिरता सिर्जना गर्न।
चरण 7: भाँडो उम्लिएसम्म पकाउनुहोस्, त्यसपछि तातो बन्द गर्नुहोस्, शाकाहारी ब्रेज्ड बीफलाई कचौरामा स्कूप गर्नुहोस् र स्वादिष्ट शाकाहारी ब्रेज्ड बीफको मजा लिनुहोस्। तपाईं यसलाई आफ्नो मनपर्ने रोटी संग सेवा गर्न सक्नुहुन्छ।
काई टोफु र सेतो टोफुको साथ शाकाहारी ब्रेज्ड बीफ कसरी पकाउने
गाईको मासु ब्रेज्ड शाकाहारी कसरी पकाउने प्रयास गर्न लायकको अर्को चीज मुख्य सामग्रीको रूपमा ky tofu र सेतो टोफु प्रयोग गर्नु हो। प्रक्रिया धेरै सरल र छिटो छ।
– सेतो टोफुको 1 टुक्रा, 100 ग्राम नरम टोफु
– 30 ग्राम शिताके च्याउ
– मटर को 30 ग्राम
– 200 ग्राम आलु, गाजर
– 700ml ताजा नरिवल पानी
– धनिया, दालचीनी, चाइभ्स, लेमनग्रास, चिली हर्न
उपकरण: स्टेनलेस स्टीलको भाँडो, प्यान, चक्कु,…
चरण 1: पहिले, तपाईले शिइटके च्याउलाई उमालेको पानीमा 10 मिनेटको लागि ब्ल्यान्च गर्नुहोस्, त्यसपछि खुट्टाहरू काट्नुहोस् र तिनीहरूलाई आधामा काट्नुहोस्। गाजर र आलुलाई सानो क्यूबमा, र सेतो टोफू, वर्गहरूमा काट्नुहोस्। यसबाहेक, तपाईंले लेमनग्रास, काट्ने लेमनग्रास र हर्न काली मिर्च तोड्नुहोस्।
चरण २: तपाईंले प्याजलाई भुइँमा लेमनग्रास र खुर्सानीको साथ साउट गर्नुहोस्, त्यसपछि बर्तनमा गाजर र आलु थप्नुहोस्। केही समयको लागि हलचल गर्नुहोस् र त्यसपछि2चम्मच ब्रेस्ड बीफ सिजनिङ पाउडर,2चम्मच साटे थप्नुहोस्। मिश्रण विशेषता रातो नभएसम्म कम गर्मी मा sauté जारी राख्नुहोस्।
चरण ३: भाँडोमा 700ml ताजा नरिवल पानी, लेमनग्रास र shiitake च्याउ थप्नुहोस्। तपाईंले आधा चम्चा नुन, 1 चम्मच MSG, 1.5 चम्मच चिनी, 2.5 चम्मच शाकाहारी मसला थप्नुपर्छ। यसको अतिरिक्त, तपाईं स्वाद गर्न मसला, मसला को अनुपात परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
चरण ४: तपाईं5मिनेटको लागि उच्च तातोमा उमाल्न जारी राख्नुहोस् र त्यसपछि के टोफु, सेतो टोफु र मटर थप्नुहोस्। जब यो भर्खर पकाइन्छ, एक स्थिरता सिर्जना गर्न पातलो ट्यापियोका स्टार्चमा हाल्नुहोस्।
चरण ५: पूरै पकाएर पकाउनुहोस्, त्यसपछि तातो बन्द गर्नुहोस्, सुगन्ध सिर्जना गर्न धनिया, दालचीनी थप्नुहोस्।
चरण 6: तपाइँ एक कचौरा मा शाकाहारी ब्रेज्ड बीफ स्कूप गर्नुहोस्, अलिकति काली मिर्च थप्नुहोस् र रोटी संग मजा लिनुहोस्।
शाकाहारी रिब्सको साथ शाकाहारी ब्रेज्ड बीफ कसरी पकाउने
शाकाहारी स्लाइस्ड बीफ बाहेक, शाकाहारी छोटो रिबहरू पनि सामग्री हुन् जुन तपाईले स्वादिष्ट शाकाहारी ब्रेज्ड बीफलाई रोटीसँग पकाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। गाईको मासु ब्रेज्ड शाकाहारी कसरी पकाउने शाकाहारी टेंडरलोइन निम्न चरणहरू अनुसार बनाइन्छ:
– 150 ग्राम शाकाहारी रिब्स
– 100 ग्राम मीठो आलु, 1 गाजर
– 15 ग्राम कीमा गरिएको बेसार, 10 ग्राम कीमा गरिएको लेमनग्रास,5ग्राम अदुवा
– 20 ग्राम साटे, 20 ग्राम खाना पकाउने तेल, 12 ग्राम नुन
– 34 ग्राम रक चिनी, 15 ग्राम सूप पाउडर
– 35 ग्राम टेपियोका पीठो, 15 ग्राम मार्जरीन
– 10 ग्राम हर्न चिली,3ग्राम खतरनाक खुर्सानी
उपकरण: ग्यास चुलो, स्टेनलेस स्टील बर्तन सेट,…
चरण 1: तपाईंले भाँडोमा 20 ग्राम खाना पकाउने तेल हाल्नुहोस् र प्यानमा अदुवा, साटे, लेमनग्रास र मिचेको बेसार हाल्नुहोस्, त्यसपछि 1.2 लिटर फिल्टर गरिएको पानी उमाल्नुहोस्। एकै समयमा, तपाईंले 12 ग्राम नुन, 34 ग्राम रक चिनी र 15 ग्राम सूप पाउडर मिलाउनुहोस् र मिश्रणलाई खाना पकाउने ब्रोथमा हाल्नुहोस्।
चरण २: बाँकी सामग्रीको प्रारम्भिक तयारी: स्लाइस गरिएको चिकन जांघ च्याउ, काटिएको गाजर, आलु चिप्स, छीलिएको र आधामा काटिएको। जब जवान रिबहरू शाकाहारी हुन्छन्, तिनीहरूलाई 20 मिनेटको लागि तातो पानीमा भिजाउनुहोस्, त्यसपछि तिनीहरूलाई निचोड्नुहोस् र तिनीहरूलाई सानो टुक्राहरूमा काट्नुहोस्।
चरण ३: तपाईंले आलु भुन्नुहोस्, त्यसपछि तिनीहरूलाई लेमनग्रासका केही हाँगाहरू (चोकिएको) संग ब्रोथको भाँडोमा राख्नुहोस् र ढक्कन बन्द गर्नुहोस्।
चरण ४: पूर्व-फ्राइड चिकन जांघ, शाकाहारी रिब, त्यसपछि तिनीहरूलाई सुकाउन बाहिर लैजानुहोस्। एकै समयमा, तपाईंले सफा कप तयार गर्नुहोस् र 20 ग्राम केचप, 20 ग्राम चिली सस, 50 ग्राम नरिवलको दूध, 0.5 ग्राम पाँच मसलाको पाउडर, झिंगा ईंटको रंगको ⅓ चम्चा पाउडर मिसाउनुहोस्। तपाईंले यो सबै मिलाउनुहोस् र एक समृद्ध रंग सिर्जना गर्न ब्रोथको भाँडोमा राख्नुहोस्।
चरण ५: जब पानीको भाँडो बलियो रूपमा उमाल्छ, भाँडामा च्याउ र जवान रिबहरू खन्याउनुहोस्, 35 ग्राम ट्यापियोका स्टार्चको साथ 50 ग्राम पानी थप्नुहोस्। पेस्ट बनाउन राम्रोसँग हलचल गर्नुहोस्।
चरण 6: यस बीचमा, तपाइँ 50 ग्राम दानेदार नुन र 10 ग्राम सींग खुर्सानी,3ग्राम खतरनाक खुर्सानी प्यूरी गर्न अगाडि बढ्नुहोस् र त्यसपछि यो सबै ल्याउनुहोस्। यो हो, तपाईंसँग नुन र काली मिर्चको साथ एक आकर्षक शाकाहारी ब्रेज्ड बीफ कचौरा छ।
चरण 7: केही मिनेटको लागि शोरबा उमाल्नुहोस् र त्यसपछि गर्मी बन्द गर्नुहोस्। अब, तपाईंले एउटा कचौरामा ब्रेज गरिएको बीफ स्कूप गर्न आवश्यक छ, केही धनिया पातहरू छर्केर रोटीसँग सेवा गर्नुहोस्।
स्वादिष्ट शाकाहारी ब्रेज्ड बीफ नूडल सूप कसरी पकाउने
एक गाईको मासु ब्रेज्ड शाकाहारी कसरी पकाउने यो धेरै स्वादिष्ट छ कि तपाईले चाउचाउ संग पकाउनु हुन्छ जुन कडा, मितव्ययी हुन्छ र शरीर को लागी पर्याप्त पोषक तत्व प्रदान गर्दछ। खाना पकाउने सामग्री शाकाहारी नूडल सूप निम्नानुसार:
– 300 ग्राम चपाउने चाउचाउ
– स्ट्रा च्याउ को 200 ग्राम
– टोफु को3टुक्रा
–2गाजर, 200 ग्राम काटिएको गाजर
– 500 ग्राम कसावा जरा, 100 ग्राम बैजनी प्याज
– थप कागती, खुर्सानी, करी, केही पाण्डन पात, सिमी स्प्राउट्स, दालचीनी, धनिया, काजूको तेल तयार गर्नुहोस्
उपकरण: भान्सा इन्फ्रारेडभाँडा, प्यान,…
चरण 1: पानीको भाँडो उठाउनुहोस् र स्टु भाँडामा कासवा जरा र गाजर ल्याउनुहोस् 30 मिनेट – 1 घण्टा पानीलाई मीठो बनाउन, त्यसपछि गाजर र कासवा जराको शव हटाउन छल्नी प्रयोग गर्नुहोस्। यस बीचमा, तपाईंले नूडल्सलाई उमालेको पानीमा उमाल्न ल्याउनुहोस् र त्यसपछि नाली गर्नुहोस्।
चरण २: च्याउको खुट्टा काटेर पातलो नुन पानीमा केही मिनेट भिजाउनुहोस्। त्यसपछि च्याउ निकाल्नुहोस् र तिनीहरूलाई धुनुहोस्।
चरण ३: भुटेको टोफुलाई सुनौलो खैरो नभएसम्म ल्याउनुहोस्, चिसो हुन दिनुहोस्, त्यसपछि साना आयताकार टुक्राहरूमा काट्नुहोस्, लगभग3सेन्टिमिटर बाक्लो। एकै समयमा, तपाईंले गाजरलाई धुनुहोस्, तिनीहरूलाई छील्नुहोस् र तिनीहरूलाई4मा काट्नुहोस्। सानो टुक्राहरूमा काट्नुहोस् वा फूलहरूलाई मनपर्ने रूपमा काट्नुहोस्। रातो प्याज बारीक काटिएको छ।
चरण ४: तेलको प्यान उठाउनुहोस्, यसलाई उमाल्नको लागि पर्खनुहोस्, त्यसपछि कीमाको टुक्राहरू थप्नुहोस् र सुगन्धित नभएसम्म फ्राइ गर्नुहोस्। त्यसपछि, तपाईंले च्याउ, टोफु, गाजर, करी पाउडर, पाण्डन पातहरू र 10 मिनेटको लागि हलचल-फ्राइ, स्वादको मौसम जस्ता सामग्रीहरू थप्नुहोस् र त्यसपछि तातो बन्द गर्नुहोस्।
चरण ५: स्टोभमा उत्तरमा, शोरबाले गाजर र कासाभा जरा फिल्टर गरेको छ, त्यसपछि मसलाको साथ पकाइएको छ। त्यसपछि, तपाईंले फेरि फोडामा हलचल-फ्राइएका सामग्रीहरूको मिश्रण थप्नुहोस्, यो भर्खरै खाएको हो कि भनेर हेर्नको लागि मसला गर्नुहोस्। अन्तमा,2चम्मच काजू तेल एक सुन्दर शाकाहारी शोरबा रंग सिर्जना गर्न। जब ब्रोथको भाँडो फेरि उमाल्छ, स्टोभ बन्द गर्नुहोस्।
चरण 6: उमालेको चाउचाउलाई कटोरामा राख्नुहोस् र त्यसपछि ब्रोथ थप्नुहोस्। त्यसोभए तपाईंले तातो शाकाहारी बीफ नूडल सूप समाप्त गर्नुभयो।
स्वादिष्ट शाकाहारी ब्रेज्ड बीफ कसरी पकाउने बारे टिप्पणीहरू
को गाईको मासु ब्रेज्ड शाकाहारी कसरी पकाउने स्वाद, स्वादिष्ट, तपाईंले निम्न रूपमा केहि चीजहरू नोट गर्न आवश्यक छ:
– खाना पकाउनु अघि सामग्रीहरूको अवस्था जाँच गर्नुहोस्, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि शाकाहारी मासु र टोफु ताजा र दीमक मुक्त छन्।
– फलफूल र तरकारी छनोट गर्दा हरियो डाँठ भएका ताजा फलफूल र तरकारीहरू छनोट गर्नुपर्छ।
– खाना पकाउने क्रममा, तपाईंले आगोलाई कम राख्नुपर्छ ताकि सामग्रीहरू नरम र जलन नदिनुहोस्। एकै समयमा, कडा सामग्रीहरू पहिले राखिन्छन्, र छिटो-पकाएको सामग्रीहरू पछि राखिन्छन्।
थप रूपमा, तपाईंले खाना पकाउने क्रममा फोम स्किम गर्न पनि ध्यान दिनुपर्छ ताकि ब्रोथ ताजा होस्।
माथि4छ गाईको मासु ब्रेज्ड शाकाहारी कसरी पकाउने मितव्ययी, स्वादिष्ट तयार कि Nguyen किम तपाईं संग साझा गर्न चाहन्छ। आशा छ कि माथिका4खाना पकाउने विधिहरूले शाकाहारी खाना नुनिलो खानाले स्वादिष्ट र आकर्षक हुँदैन भन्ने धारणालाई परिवर्तन गर्नेछ। तुरुन्तै पूर्णिमाको दिनमा आफ्नो शाकाहारी मेनुमा डिश थप्नुहोस्!
यदि तपाईं हाल Nguyen Kim मा उपलब्ध घरेलु उत्पादनहरू बारे थप परामर्श लिन चाहनुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई द्रुत समर्थनको लागि निम्न च्यानलहरू मार्फत तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस्:
हटलाइन: १८०० ६८०० (नि:शुल्क)
च्याट: फेसबुक NguyenKim (nguyenkim.com) वा वेबसाइट Nguyenkim.com
Nguyen किम किनमेल केन्द्र राष्ट्रव्यापी
घरमा शाकाहारी ब्रेज्ड बीफ पकाउँदा प्रायः सोधिने प्रश्नहरू
शाकाहारी बीफ ब्रोथ पकाउन के सामग्री चाहिन्छ?
नमस्ते साथीहरू, स्वादिष्ट शाकाहारी चाउचाउ सूप पकाउन, तपाईंले तयार गर्नुपर्छ: च्याउ (डोंग सह, सुई, कुखुराको जांघ,…), क्यान चाउचाउ, टोफु के,… साथै, ट्युबर काउली, गाजर, नाशपाती, स्याउहरू छन्। प्राकृतिक रूपमा मीठो बनाउनका लागि सामग्रीहरू पनि। यदि तपाइँ ब्रोथ थप सुगन्धित हुन चाहनुहुन्छ भने, यसलाई ग्रील्ड सेतो प्याजमा राख्नुहोस्, साटे।
शाकाहारी ब्रेज्ड बीफको साथ के स्वादिष्ट छ?
नमस्ते साथीहरु, रोटी, चाउचाउ र अण्डा चाउचाउ संग शाकाहारी ब्रेज्ड बीफ धेरै स्वादिष्ट हुनेछ। तर, रोटीसँग खाँदा शाकाहारी गाईको मासु अलि गाढा पकाएर खानुपर्छ (शोरबामा थोरै ट्यापियोका स्टार्च हाल्दा) धेरै राम्रो हुन्छ।
Xem Thêm [CHI TIẾT] Cách Làm Chè Dừa Dầm Thơm Ngon, Béo Bùi Hấp Dẫn | Grado.vn
Nokia RM-1110 215 – Đen | Grado.vn